नाटक के हो ? पत्ता लगाउँदै घिमिरे युवराज::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
नाटक के हो ? पत्ता लगाउँदै घिमिरे युवराज
कुराकानीका क्रममा नाटकको परिभाषा सोधियो, उनले जवाफ दिए, ‘थाहा नै छैन’ । एउटा चल्तिको रंगकर्मीलाई नाटकको परिभाषा थाहा छैन ? फेरी सोधियो, ‘साँच्चै थाहा छैन, पत्ता लगाउँदैछु ।’ अर्काे प्रश्न थपियोे, कलाकारिताको भूत चढ्दा कस्तो परिभाषा दिइन्थ्यो त ? उनले भने–‘त्यति बेला सतही कुरा बढि हुन्थे जस्तै नाटक अभिनयको एउटा माध्यम हो । कि भने क्लिसे (सहलिय अर्थात थोत्रिएका कुरा) परिभाषा हुन्थे । डेढ दशक लामो समयदेखि रंगकर्ममा साधना गरिरहेका भएपनि उनी यस्तै जवाफ दिन्छन् । रंगकर्ममा डेढ दशक र हाल उनी चिनिने शिल्पी थिएटरमा आठ बर्ष र गोठाले नाटक घर बत्तिसपुतलीमा भेटिने नाट्यकर्मी हुन्–घिमिरे युवराज ।
मोरङ जिल्लाको कर्जुनामा २०३६ सालमा जन्मिएका घिमिरे युवराज तिन सन्तानमध्येका हुन् । प्रारम्भिक शिक्षा मोरङबाटै सकेका उनले उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं रोजे । विद्यालय पढ्दा नाटक गर्ने, कविता लेख्नेजस्ता अतिरिक्त कार्यमा सक्रिय रहने उनी घरमा पनि मेहनती थिए । काठमाडौं आएर मिनभवन क्याम्पस पढेका घिमिरेले लेखनमा भविष्य देखेका थिए । भन्छन्–‘काठमाडौं आउँदाताका म भयंकर लेख्न सक्छु भन्ने सोच्थँं । खासै अरु सपना थिएनन् । तराईको ठाउँ भएकाले हिन्दी सिनेमाले एउटा सपना दिन्थ्यो । कि त अजंगको पुलिस कि त बलिष्ठ हिरो । काठमाडौं आउदा त्यो सपना पनि थियो ।’ दाईले खोलेको कम्युनिकेसनमा बसेर पढ्दै गर्दा कथा, कविता लेख्थे र सहरका अधिकांश पत्रिकामा छाप्नका लागि छोड्थे तर कसैले छाप्थेनन् । एकदिन दशैंमा घर जाँदा एउटा साथीले पत्रिकामा कथा देखेको बताएपछि ‘मुना’ पत्रिकाको लाइबे्ररीमा गएर खोज्दा स्केचसहितको आफ्नो कथा पाए । उनी सम्ँिझदै भन्छन्–‘पहिलो लेखनको कमाइ साँढे पाँच सयले एक बोरा चामल किनें, दाई पनि साह्रै खुसी हुनुभयो ।’
अण्डरलाइन नामक पत्रिकाबाट पत्रकारिता सुरु गरेका उनले नयाँ सडक, हिमालय टाइम्स लगायतका पत्रिकामा कलाका हरेक बिधामा कलम चलाउँथे । करिब चार बर्ष पत्रकारिता गरेका उनले कलाकार नीर शाहमाथि एउटा समाचार लेखेपछि पत्रिकाबाट निकालिए । २०५५ सालमा राष्ट्रिय नाचघरबाट अभिनयको औपचारिक कक्षा लिएका उनले गरुकुल थिएटरमा नाटक गर्दै गर्दा पनि पत्रिकामा लेख्थे । राति अरु सबै निदाएपछि आफ्नो उर्वर समय सुरु हुने बताउने उनले नीर शाहको बारेमा समाचार लेख्दा सो पत्रिकाका सम्पादक नीर शाहको साथी रहेकाले सो पत्रिका छोड्नु परेको बताए । राष्ट्रिय नाचघरमा एक बर्ष र गुरुकुल थिएटरमा ६ बर्ष बिताएपछि उनले सातजना नाट्य सहकर्मीसँग मिलेर ‘शिल्पी नाट्य समुह’ खोेले ।
फरक शैलीमा नाटक गर्न रुचाउने उनी परम्परागत शैलीलाई तोड्दै धेरै नयाँ ठाउँमा नाटक देखाए । दूई दर्जन नाटकमा अभिनय र आधा दर्जन नाटक निर्देशन गरेका उनले डेनमार्कबाट नाटकको दूई बर्षे कोर्स पनि सके । उनले गरेका नाटकमध्ये एप्पल कार्ट, मायादेवीको सपना, कथान्तरमा, हड्डा ग्याम्लर उनलाई विशेष मन पर्छन् । तामाङ, डोटेली, थारू, झाँगड लगायत विविध भाषामा नाटक गरेका उनी अरुले आफुलाई के भन्छन् भन्ने कुरामा खासै चासो नराख्ने बताउँछन् ।
डेढ दशक भन्दा धेरै समय रंगकर्ममा बिताएका उनले धेरै मानिस चिने । उनीसँगै लामो समय काम गरेका र शिल्पी नाट्य समुहको संस्थापक सदस्यमध्येका एक तथा मण्डला थिएटरका राजन खतिवडा उनको नराम्रो पक्षबारे खुल्न चाहँदैनन् । राजनका अनुसार उनी दुरदर्शी र मानिससँग छिटै सम्बन्ध बनाउन जान्ने व्यक्ति हुन् । गुरुकुल नाटकघरमा छँदा सामान्य देखभेट भएपनि युवराज डेनमार्कबाट आएपछि अलि नजिकबाट चिनेको बताउँछन् राजन । भर्खरै खुलेको थिएटर मलका केदार श्रेष्ठका अनुसार उनी बोल्दा अलि खस्रा र टर्रा मान्छे हुन् । नाटकलाई अनुसन्धान र प्रयोगको रुपमा लिने युवराजको राम्रो पक्ष हो ।